China A80 Steel Truss Lattice Girder YeCarport fekitori nevagadziri |Zhanzhi
A80 Structural steel trusses lattice girder ndiyo simbi yekutsigira michina, inowanikwa pasi pedenga kuti ipe rutsigiro.Kazhinji, matanda edenga anogadzirwa nezvinhu zviviri, simbi nematanda.
Simbi truss ine simbi rebars seyekumusoro chord, yezasi chord uye webhu nhengo uye yakabatana nekupokana nzvimbo welding inonzi simbi truss.Simbi truss yakagadzirwa nesimbi zvimiro isarudzo yakajairika pakati pekutengeserana, maindasitiri uye makuru ekugara.
1) Zvinhu: HRB400
3) Kurapa kwepamusoro: galvanized.
5) Kureba: 3-12m, sezvinodiwa nevatengi
6)Upper chord dhayamita: 8mm
7) Lower chord dhayamita: 6mm
8) Diagonal waya dhayamita: 4mm
9) Upamhi: 80mm
10) Kureba: 80mm
11) Welding spacing: 200mm
12) Kurongedza: yakajairika gungwa-yakakodzera kurongedza
Advantages Economy: Iyo nzira yetruss inonzwisisika nemutengo wakaderera uye ine mukana wakajeka munzvimbo iyi;Inogona kugadzirwa seyakapetwa-mativi dhizaini.
Zvakanakira: Kupfupisa nguva yekuvaka purojekiti;Deredza kutsigirwa kwenguva pfupi.
Chengetedzo: Kushanda kwakanaka kwekupwanya kuramba uye kudzivirira moto;
Kuvimbika: yakanaka pfuma kudzivirira kudengenyeka.
(1) Chiedza muhuremu, kusimba kwepamusoro, hukuru hwekurodha pamwe nekugona kwekurwisa kudengenyeka kwepasi.
(2) Nyore mukushanda kwekuvaka, nyore kuisa.
(3) Inogona kuita sechikamu chechimiro chekutakura huremu, kuderedza mutengo wezvinhu.
(4)Isai pani pamusoro pewaya yakasungwa net kuzadza simende pakati pavo.
(5) Iri rudzi rwesimbi truss pasi decking sheet ine kukwesha kwakasimba pakati pekongiri uye pasi slab, isingadziviri moto.
(6) Iyo simbi truss yakabatana nesimbi bar, ichiita kuti ive nesimba repamusoro.
1) Inoshandiswa kune precast slabs, pre-yakakwira-kumhanya njanji yekurara.
2) Inoshandiswa mune dzakawanda dzakakwirira-kukwira, ultra- yakakwirira-kukwira simbi zvivakwa
3)Inoshandiswa kuvaka simbi, mezzanine pasi ye "LOFT"
4) Simba rinoshandiswa kune yakaoma, yakakosha-yakaita chimiro, chivakwa
5)Inoshandiswa in-situ kongiri chimiro (RC) zvivakwa
6) Inoshandiswa mukuvaka kwemateru edenga chimiro